Voamariky ny Fanapahana Tranonkala sy Fiatoan’ny Twitter ny Fifidianana Ekoadaoriana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Avrily 2017 5:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, বাংলা, Español, Français, English
“Miafina ny fandatsaha-bato.” Ireo Ekoadaoriana nifidy filoham-pirenena tamin'ny taona 2013, tao Colegio Benalcázar. Sary avy amin'i Fernanda LeMarie ho an'ny Cancillería del Ecuador, tao amin'ny Flickr (CC BY-SA 2.0)
Tamin'ireo andro ankatoky ny fifidianana miady dia miady tamin'ny 2 Aprily tao Ekoadaoro, nanatri-maso ny onjan'ny fampiatoana kaonty media sosialy sy ny fanafihana ara-teknika izay ahiahin'izy ireo fa natao noho ny antony politika ireo mpikatroka an-tserasera sy ny vondrona mpiaro ny zo nomerika.
Tsy mahagaga an'ireo efa naneho ny heviny an-tserasera momba ny kandidà izany. Nilaza ireo solontenan'ny ONG mpiaro ny zon'ny fampitam-baovao, anisan'izany ny Fundamedios sy ny Usuarios Digitales fa niaritra fanafihana ara-teknika ny tranonkalan'izy ireo tao anatin'ny telo volana farany, izay matetika aorian'ny famoahana fitaovana mifandraika amin'ny fifidianana toy ny fanoroana ny toerana sy ny fomba atao amin'ny fifidianana ary ny fomba fanarahana ny fizotry ny fanisam-bato. Hitan'izy ireo tamin'ny tranonkalan'ny mpomba ny mpanohitra fa nihisatra tampoka ny zotra nomen'ny mpanome tolotra aterineto ao an-toerana ny harivan'ny androm-pifidianana .
Nanomboka nirongatra ny famoretana ny tolakandron'ny 30 Martsa, raha nahazo filazana tampoka avy amin'ny Twitter momba ny sioka iray nivoaka tamin'ny volana Jolay 2016 ny kaonty Twitter-n'ny Usuarios Digitales, ONG iray ao Quito miasa manokana amin'ny fidirana amin'ny aterineto sy ny politika hafa mifandraika amin'ny Aterineto :
#AlertaDigitalEc bloquean cuenta de @Twitter d @usuariosdigital por contenido relacionado a candidato presidencial https://t.co/iFMF4Of4N1 pic.twitter.com/ruiQmrRX5y
— Usuarios Digitales (@usuariosdigital) April 3, 2017
#FanairanaNomerikaEk nosakanana noho ny votoaty mifandray amin'ny kandidà ho filoham-pirenena ny kaonty Twitter @usuariosdigital
Hita eto ambany, ny sioka nanafintohina, nivoaka sivy volana talohan'ny nitoriana azy ho mihoa-pefy, nefa sady tsy nandika ny fitsipiky Twitter no tsy nandika ny lalànan'i Ekoadaoro.
Dikanteny: #DigitalAlertEC naato noho ny sioka nahitana vaovao mifandraika amin'ny hetran'i @LeninMorenoPAIS ny kaontin'ny @SathBoss
Nanoratra tao amin'ny bilaogin-dahatsoratra izay mamaritra ny zava-nitranga ny Digitales Usuarios :
Esta situación altera el normal desenvolvimiento de nuestro trabajo y nos mantiene al margen de nuestra competencia de monitorear amenazas al libre ejercicio de los derechos en internet.
Nuestro trabajo lo hacemos con el fin de que autoridades e involucrados garanticen el libre ejercicio de los derechos en internet y que los sectores involucrados en la gobernanza en internet tengan un panorama completo de la situación para generar mejores políticas públicas desde un punto de protección de derechos humanos.
Misy fiantraikany eo amin'ny fizotry ny asanay sy mametra amin'ny fomba henjana ny fahafahanay manara-maso ireo fandrahonana mamely ny zo an-tserasera ny zava-miseho.
Manao ny asanay izahay ao anatin'ny ezaka hahazoana antoka fa manome antoka ny fampiharana maimaim-poana ny zo an-tserasera ny manampahefana sy ireo olon-kafa eo amin'ny fahefana ary mahatakatra tsara ny toe-draharaha ny sampan-draharaha mandray anjara amin'ny fitantanana ny Aterineto , mba hanatsarana ny politikam-bahoaka noho ny tombontsoa fiarovana ny zon'olombelona.
Ny ampitson'iny, tamin'ny 31 Martsa, nandalo ny tranga izay ninoany fa fanafihana DDoS (Fanafihana Fandavana Tolotra) ny lohamilin'ny tranonkala Usuarios Digitales. Nitranga izany fotoana fohy taorian'ny namoahan'izy ireo sioka iray nitatitra fa notapahana ny tranonkalan'ny kandidà mpitarika ny antoko mpanohitra Guillermo Lasso.
Tamin'ny 2 Aprily, nanara-maso ny andrana ara-teknika ireo mpikaroka ao amin'ny Usuarios Digitales ka nahita fa nisy ny fanelingelenana manerana ny tambajotra nanomboka tamin'ny 6:05 ka hatramin'ny 7:20 hariva tamin'ireo mpanome tolotra aterineto ao an-toerana, anisan'izany ny Movistar, CNT ary Netlife. Taorian'ny fikorontanana, nahita ny mpikaroka fa nihena tampoka ny fifamoivoizana tao amin'ny tranonkalan'ireo izay fantatra fa maneho fomba fijery manohitra ny kandidà Alianza PAIS Lenin Moreno, raha nandeha tsara ara-dalàna kosa ny tranonkalan'ny Foibem-Pifidianana Nasionaly.Tsy tratran'izany fahatapahana izany ireo tranonkala ireo tao amin'ny tolotra VPN, Claro sy TvCable.
Nanana fahatapahana fohy matetika ny lohamilin'ny tranonkalan'ny Usuarios Digitales, toy izany no nitranga tamin'ny 3 Aprily, tamin'ny fotoana nanoratana ity tantara ity :
Lasa fahazarana ho an'ny mpikatroka ara-politika ao amin'ny media sosialy ihany koa ny fanafihana an-tserasera manakaiky fifidianana. Nandritra ny herintaona, niatrika fampiatoana kaonty ny mpisera Twitter maneho fanakianana an'i Lenin Moreno, Filoha lefitr'i Ekoadaoro teo aloha sady kandidà heverina ho mpandresy amin'ny fifidianana ankapobeny na dia teo aza ny fiampangana azy ho nanao hosoka. Na dia maro tamin'ireo aza no nomelohina noho ny zon'ny mpamorona dia miahiahy ireo mpisera fa lasibatra izy ireo noho ny antony ara-politika.
Ho an'ny maro, ny fahefan'ny antokon'ny filoha Rafael Correa izay eo amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao ihany no mitohy rehefa eo amin'ny fitondrana i Lenin Moreno. Noderain'ny maro ny mpitarika mpandrendri-bahoaka ankavia tamin'ny fanavaozana ny politika ara-toekarena ho amin'ny tombontsoan'ny mahantra. Very laza i Correa tato anatin'ny volana maromaro noho ny fiampangana kolikoly.
Voakiana noho ny fanalefahana ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana ao Ekoadaoro ihany koa i Correa ary tsy misalasala miteny zava-dratsy momba ny olom-pirenena (anisan'izany ny mpiasam-panjakana) izay tsy mankasitraka azy intsony. Maro ireo mpanao gazety, mpikatroka ary mpanao esoeso no niaina herisetra rehefa avy nitsikera an'i Correa sy ny politikany.